चीन भ्रमणले आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ उचाइ : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणले दुई देशको पारस्परिक सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउँदै देशको आर्थिक क्षेत्रले नयाँ उचाइ लिने विश्वास लिइएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले जिल्ला सभापतिहरुको भेलाको पूर्वसन्ध्यामा सोमबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आह्वान गरेको छ । बैठक जिल्ला सभापतिहरुको भेला हुने मकवानपुरको हेटौंडामा बस्नेछ ।
३३ प्रतिशत महिला नभई किन ने क पा दल दर्ता ?
सर्वोच्च अदालतले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) दल दर्ता गर्नुको कारण १५ दिनभित्र लिखित रुपमा पेश गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश गरेको छ ।
शक्तिशाली सरकारसँग संविधान संशोधनको आशा छ : महतो
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले राजपा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन तयार रहेको बताएका छन् ।
कार्यकारी राष्ट्रपति कांग्रेसलाई मान्य हुँदैन : कोइराला
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली कांग्रेसलाई कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने बताएका छन् । प्रेस युनियन मोरङले विराटनगरमा बुधबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कोइरालाले वर्तमान सरकारले दुई तिहाइको बलमा कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली ल्याउन खोजिए कांग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने प्रस्ट पारे ।
४ मन्त्रालयको बजेटमाथि संसदमा छलफल
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७५ माथिको छलफलमा भाग लिने सांसदले खासगरी कृषि, सञ्चार, खानेपानी र कानून निर्माणका विषयमा केन्द्रित रहेर आफ्ना धारणा राखेका छन् ।
नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले पूर्वमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी जनयुद्ध, सहिद, बेपत्ता, घाइते परिवारलाई धोका दिएको बताएका छन् ।
४ मन्त्रीसहित प्रधानमन्त्री असार ५ गते चीन जाने
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ४ जना मन्त्रीहरुसहित असार ५ गते चीन भ्रमणमा जाने भएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको तालिका सार्वजनिक गरेको हो । चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणमा ओली ६ दिने राजकीय भ्रमणमा जान लागेका हुन् ।
महतोलाई संसदीय दलको नेता बन्न दबाब
राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका राजेन्द्र महतोका निकटहरूले संसदीय दलको नेतामा अघि सर्न दबाब दिएका छन् । यसका लागि पार्टीमा एक व्यक्ति एक पदको नीतिलाई अगाडि बढाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने वातावरण मिलाउन महतोलाई पहल लिन उनका निकटहरूले आग्रह गरिरहेका छन् ।
संसदीय दलको नेता बन्न सर्वसम्मति खोज्दै ठाकुर
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का संयोजक महन्थ ठाकुर प्रतिस्पर्धा गरी संसदीय दलको नेता नबन्ने भएका छन् । सर्वसम्मति गरी संसदीय दलको नेताको रूपमा ठाकुरलाई बनाउनुपर्ने माग पार्टीभित्र पनि उठिरहेको बताइएको छ ।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको छैटौँ महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि चर्को धु्रविकरण देखिएको छ ।
अब राजपा सरकारमा जान्छ : महासचिव झा
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका महासचिव केशव झाले आफ्नो पार्टी बढीमा एक साताभित्रै सरकारमा सहभागी हुने स्पष्ट पारेका छन् । सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भने, “हामी सरकारमा सहभागी हुनेबारे सम्वाद जारी छ । सरकारले राजपासँग सम्वाद जारी राखेको छ ।
अब आर्थिक समृद्धि र विकासको दशक : दाहाल
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अबको दशक आर्थिक समृद्धि र विकासको दशक हुने बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभामा चार समित
राष्ट्रियसभा नियमावली २०७५ मा चार समितिसहित सदस्यको पदावधि निर्णय गर्ने तरिकाको व्यवस्था गरिएको छ ।
सभामुख वा उपसभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने माग
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दिलेन्द्र बडुले सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको भएको भन्दै दुईमध्ये एकले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन् । शनिबार काठमाडैंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बडुले एउटै पार्टीबाट सभामुख र उपसभामुख बन्नु संविधानको उल्लंघन भएको बताउँदै तत्काल एकले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।